Cishe zonke uhlelo lokusebenza avele njalo amaphutha, ulungise ukuthi onjiniyela bengayi ngesikhathi esisodwa, kodwa kuphela uma isevisi iphakethe entsha. Omunye walezi zinkinga inethiwekhi engaziwa. Senzeka abasebenzisi ekhaya inthanethi on the computer lapho efakwe izinhlelo ezifana Windows 7, Vista kanye kukwenza kungenzeki ukunikeza ukufinyelela amafayela wabelane, kanye ukufakwa imishini third-party uma ithola Inthanethi.
Esimweni lapho kukhona uxhaxha ezingaziwa ngaphandle ukufinyelela kwenethiwekhi, lokuqala kufanele sithole ukuthi umuntu ngokwakhe ukwazi ukulungisa inkinga.
Ekuqaleni kuwufanele ehlola uxhumano kanye nokusebenza router. Qiniseka ukuhlola uxhumano ikhebula bevela kuzo zonke izinhlangothi. Kufanele uqiniseke ukuthi izixhumi ikhebula ufakwa imishini lize ukuchofozwa. Futhi, uma kunokwenzeka, ukuhlola ubuqotho babo bonke amakhebuli.
It ke uhlola umsebenzi adaptha inethiwekhi. Ngezinye izikhathi isimo kuphakama lapho static IP-ikheli elihlukile astray ngokuphelele. Uma umhlinzeki liyadingeka faka ikheli, sicela uxhumane helpdesk, njengoba kulokhu, inethiwekhi engaziwa livela umhlinzeki. Lapha ngaphandle kosizo technical support lubaluleke.
Izinyathelo okudingekayo okungakusiza ukuba ubhekane nale nkinga njengenhlangano ezingaziwa Windows 7 Network
Ukuze ususe i inethiwekhi engaziwa, kubalulekile ukusizakala Iqalisa, bese wenze reconnection. Kwezinye izimo, le ndlela iyona eyodwa evumela ukuthi wena ungena kwi-Inthanethi. Ukuvela of the noxhumo lenethiwekhi kwifolda kukwenza kungenzeki ukwenza ukuxhumana.
Ngezinye izikhathi udinga ukuya Manager Kudivayisi. Kuze kube yimanje, property imenyu ngokuthi "Computer yami" ukuze sitholakale 'Hardware "ithebhu. Ngokulandelayo, sidinga ukuthola ikhadi inethiwekhi bese uyikhubaze. Le nqubo iyaphindwa njalo emva ngamunye imishini kabusha.
inethiwekhi ongashiwongo ingalungiswa ku-akhawunti Administrator ngokusebenzisa isofthiwe ye-Adobe. Ngenxa yale njongo siyathola lapho kungakhathaliseki isakhi kukhompyutha kwalolu hlelo. Lokhu kungenziwa nge-nto "Engeza noma Susa Izinhlelo", esemgwaqweni control panel. Khona-ke, ukuvula ifolda kufanele Bonjour futhi uhlole ukuthi amafayela mDNSResponder.ehe kusenabantu Yiqiniso, mdnsnsp.dll. Futhi efakwe isofthiwe ye-Adobe for asihlola iklayenti nokususwa yabo kungabangela izinkinga ezimbi. Uma kunjalo, ukuthi kufanele ugcizelele bese ucindezela ikhi inhlanganisela Shift + Susa. Khona-ke, vula ngokushesha umyalo bese ufaka mDNSResponder - ukususa. Ngemva kwalokho-ke kuyadingeka ukuvula Bonjour futhi uqambe kabusha la mafayela ezimbili.
Isinyathelo sokugcina kabusha ikhompyutha bese ususa lwemibhalo ngenhla. Khona-ke ukusebenzisa umugqa wemiyalo isiqondisi netsh kabusha, futhi futhi ukuqaliswa Iqalisa phansi PC. Futhi, cishe, inethiwekhi engaziwa ngeke zisaba aphazamise umsebenzi.
sokugcina kungaba ukusetha kabusha onzima router, okuyinto eyenziwa usebenzisa waqonda iphepha isiqeshana noma wire elincanyana. Okokuqala, kukhona ukuvulwa nge «kabusha» yombhalo oqoshiwe. ongale kocingo ke esifakiwe futhi inkinobho reset icindezelwa. Kufanele ubamba amasekhondi angu-5 bese ukudedela. Esimweni lapho zokuxhumana kwase kubuyiselwe, kukhona inkinga wayehlobene ukungasebenzi router.
Kuleso simo, uma izinyathelo ezingenhla musa lisize inethiwekhi, ungasiza ikhadi inethiwekhi umshayeli ukufakwa, esisetshenziselwa ukuxhuma kwi-Inthanethi. Ukuze afeze ukuthola inguqulo entsha umshayeli, udinga ukufinyelela ikhompyutha, esesikhundleni esitebeleni kwi-Inthanethi. Inguqulo yamuva kakhulu umshayeli iwebhusayithi nomkhiqizi olusemthethweni. Uma unenkinga ekutholeni yokushayela efanelekayo, kungenzeka ukusebenzisa uhlelo lokutakula esakhelwe ngaphakathi.
Kuvimbela internet. Okufanele ukwenze ukuze uthole kabusha isivinini zakhe eziphakeme
PPPoE - kuyini? Indlela usethe PPPoE uxhumano
"Socket 1156": CPU isokhethi yokuqala CPU ESEMQOKA umndeni
Ariel Castro (Cleveland Maniac): Biography, isephulamthetho we isisulu, inkantolo futhi isinqumo esithathiwe
Beautiful ubhontshisi Georgian usuku lokuzalwa, lomshado, weminyaka
Yini edingekayo ukuze okokuqala usana
Dynamics kwenani - ikakhulukazi ukubaluleka nezinhlobo